အစားနိုင်ဆုံးလူတွေအကြောင်း | yathar Magazine
အစားအသောက်ကို အားကစားတစ်ခုလိုမျိုး ပွဲလုပ်ပြီး စားတာတွေ မြင်ဖူးလား ?
တကယ်ကို အားကစားသမားတွေလိုမျိုး အားအင်အပြည့် နဲ့ ဟန်ဘာဂါ အလုံးလိုက်ကြီးတွေ ၊ ဆန်းဝှစ် တွေ ၊ Hot Dog တွေ ကို တမုန်းစားပြပြီး ပြိုင်ဆိုင်ကြတာပါ ။
ဒီလိုပြိုင်ပွဲ တွေ မှာ World Record တွေ ရရှိထားတဲ့ သူတွေ အကြောင်းကို ဒီနေ့ပြောပြမှာပါ ။
အစားဘုရင် ရဲ့ အစဉ်အလာ ပြိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ Takeru ဟာ လည်း အစားနဲ့ ပတ်သက် ရင် တော်တော်ကြီး တော့ ခေသူမဟုတ်ပါဝူး။ 2008 မှာ သူဟာ Hot Dog 59 ခုကို 12 မိနစ် အတွင်း စားပြခဲ့တာပါ။ သူလည်း အစားကြီး တလိုင်းပါပဲ။
-Tim “Eater X” Janus
ကဲ ဒီတစ်ခေါက်မှာ တော့ စားပါတယ်ဆိုတဲ့ တဲ့ သူတွေ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ အစားကြီး တစ်လိုင်းကို အားကြီးနဲ့ အားကစားလို ဆွဲထားတဲ့ သူတွေ ကို အားကျမိပါသလား ? သင်ရော ဘယ်လောက်စားနိုင်မယ်လို့ တွေးမိလဲ ? နောက်အပတ်တွေ မှာ လည်းဆက်လက် အားပေးကြပါဦး